Furtuu Jireenya Eebbifamaa (The Key to a Blessed Life) - biblestudyproject
(The Key to a Blessed Life)
Aallatamoo obboloota koo kan Itoophiyaa jirtan,
Hundinuu yakkaniiru, ulfinni Waaqayyoos isaanitti hir’ateera. (Roomaa 3:23)
Barreeffamni kun kan barreeffame Noormaan Manzooniin yommuu ta’u, kunis kan ta’e gaaffii Itoophiyaa, magaalaa Finfinneetti qindeessaa miidiyaa fi sirna barreeffamaa kan ta’e Zaman Indaaleedhaan. Karaa isaan barreeffamni kun Afaan Oromoodhaan baay’atee tola rabsamuu danda’a. Kitaabni A Handbook of Bible Doctrine jedhamuu Afaan Oromoodhaan, akkasumas kitaabonni afaan Ingiliziin barreeffaman hedduun toora websaayitii Noormaan, BibleStudyProject.org jedhamu irratti ni argamu. Inni teessoo kanaan argamuu ni danda’a
normanmanzon7 @ gmail.com.